राष्ट्र बैंकको सहायकस्तरदेखि गभर्नरसम्म महाप्रसाद अधिकारीको यात्रा कसरी पछि पारे चिन्तामणि शिवाकोटीलाई?
अरुण सापकोटा सोमबार, चैत २४, २०७६, १७:११
काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकको १७ औँ गभर्नरमा केन्द्रीय बैंककै क्याडर महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त भएका छन्। राष्ट्र बैंकको ३१ वर्षे सेवा अवधिभरमा डेपुटी गभर्नरसम्म भएका अधिकारीलाई सरकारले अबको ५ वर्ष मुलुकको मौद्रिक नीतिको नेतृत्व गर्ने जिम्मा दिएको हो।
राष्ट्र बैंकको इतिहासमा पहिलोपटक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई गभर्नर बनाइएको छ। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा बरियतामा पुछारबाट दोस्रो स्थानमा रहेका अधिकारीलाई डेपुटी गभर्नर बनाएका थिए। संयोग नै मान्नुपर्छ, उनै खतिवडाले अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल पुरा भएपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नै अधिकारीलाई लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको छनौट समितिले अधिकारीलाई लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी बनाउन सिफारिस गरेको थियो।
लगानी बोर्डको सिइओको रूपमा कार्यकाल पुरा नहुँदै अधिकारीलाई सरकारले अर्को जिम्मेवारी दिएको छ।
लकडाउन भए पनि सोमबार कार्यालयमा नियमित कामका लागि उपस्थित अधिकारीले नेपाल लाइभसँगको सम्पर्कमा गभर्नर पदका लागि आफ्नो दाबेदारी रहेको बताएका थिए।
अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकभित्र 'प्राविधिक' मानिन्थ्यो। नियमनकारी अभ्यासमा कडा स्वभावका अधिकारीलाई यही छविका कारण अर्थमन्त्री खतिवडाले गभर्नरका रूपमा अघि सारेका हुन्। तर, अर्थमन्त्रालयको छाँयाका रूपमा केन्द्रीय बैंक चलेको भन्दै विगतमा भएको आलोचनाबाट मुक्त हुन पनि उनलाई कठिन छ। अर्थमन्त्री खतिवडाकै छाँयाका रूपमा उनले अब पनि काम गर्ने हुन् वा स्वतन्त्र र स्वायत्त केन्द्रीय बैंकका रूपमा अघि बढाउने हुन् हेर्न बाँकी छ।
को हुन् अधिकारी
अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकमा २०४२ सालमा सहायक पदबाट जागिर सुरु गरेका थिए। राष्ट्र बैंकमा जागिरे हुँदै गर्दा उनी भारतमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पढ्न गए। नेपाल राष्ट्र बैंकमा राष्ट्र बैंक विभाग र बैंकिङ विभाग बीचमा ठूलो समस्या थियो। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सकेर आउने बित्तिकै उनले उक्त समस्या समाधानका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
त्यसपछि उनी उपनिर्देशक भए। उपनिर्देशक भएपछि उनले अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण विभागमा रहेर ४ वर्षभन्दा धेरै समय काम गरे। निर्देशक पदमा बढुवा भएपछि सुपरीवेक्षण विभागमा लामो समय काम गरेका थिए। नेपालमा बासेल ३ लागू गर्ने क्रममा उनको सबैभन्दा ठूलो योगदान रहेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनकारी र सुपरीवेक्षकीय भूमिका बढाउन उनको ठूलो भूमिका थियो।
कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएपछि उनले छोटो समय नियमन विभागमा रहेर काम गरेका थिए। त्यसलगत्तै उनलाई तत्कालीन गभर्नर खतिवडाले डेपुटी गभर्नरमा नियुक्ति गरेका थिए। डेपुटी गभर्नर हुँदा उनले खतिवडाका निति कार्यान्वयनमा अग्रपंतिमा बसेर काम गरे।
खतिवडा गभर्नर हुँदा गोपालप्रसाद काफ्ले वरिष्ठ गभर्नर थिए भने अधिकारी कनिष्ठ। कनिष्ठ गभर्नर भए पनि खतिवडाको नीतिगत तथा कार्यगत सारथी थिए अधिकारी। वित्तीय स्थायित्व, सुशासन, सुरपरिवेक्षण प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउनका लागि उनले राष्ट्र बैंकमा रहेर लामो समय काम गरेका थिए। यस अवधिमा उनले केही बैंकहरूलाई कारबाही समेत गरेका थिए।
नेपालमात्रै नभएर अन्य देशका केन्द्रीय बैंकहरूलाई पनि अबका दिनमा तरलताको व्यवस्थापनमा चुनौती छ। बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय अधिकारीका लागि सबैभन्दा धेरै चुनौतीपूर्ण रहेको नेपाल बैंकका अध्यक्ष बासुदेव अधिकारी बताउँछन्।
कोरोनाको कारणले अब धेरै व्यवसाय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। अर्कोतर्फ बैंकको ब्याजदर पनि उच्च छ। अहिलेको उच्च ब्याजदरलाई कसरी बान्छित सिमाभित्र राख्ने भन्ने चुनौती अधिकारीसँग रहेको उनले बताए।
'अर्थतन्त्र घट्दो क्रममा जाने तर ब्याजदर भने माथि नै बसिराख्ने भन्ने कुरा सान्दर्भिक हुँदैन,' अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसैले ब्याजदरलाई तल्लो बिन्दूमा कसरी राख्न सकिन्छ ताकी ब्याजदरका कारणले व्यापार व्यवसाय चल्न नसक्ने नहोस्।’
कोरोनाको जोखिम अझै बढे चलिरहेका व्यापार व्यवसाय पनि बन्ने हुने अवस्थामा जान सक्छन्। यसले भइरहेको रोजगारी पनि गुम्ने सम्भावना छ। अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली फर्किने क्रम पनि बढ्न सक्छ।
यस्तो अवस्थामा नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने गरी वित्तीय नीति उनले बनाउनुपर्नेछ। संकटमा रहेको अर्थतन्त्र उकास्ने गरी सरकारले लिने नीतिलाई सहयोग गर्ने गरी केन्द्रिय बैंक अघि बढ्नुपर्नेछ।
कसरी पछि पारे चिन्तामणिलाई?
तत्कालीन गभर्नर डा चिरंजिबी नेपालको अवकाशअघिदेखि नै कायममुकायम गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले आफूलाई गभर्नरका रूपमा दाबेदारी प्रस्तुत गर्दै आएका थिए। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै कार्यक्रम राखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हातबाट पुस्तकसमेत विमोचन गराएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओली र शिवाकोटीको जन्म तेह्रथुममा भएको थियो। ओली त्यहाँबाट झापा झरे भने शिवाकोटी मोरङ। पूर्वेली शिवाकोटीलाई अर्का पूर्वेली अर्थात् खोटाङका अधिकारीले पछाडि पारेका छन्।
४४ सार्वजनिक संस्थान : कुन अब्बल? कुन धराशायी?
क्लासिक टेकले गर्‍यो सबै कर्मचारीको कोरोना बिमा बुधबार, जेठ १४, २०७७